कोरोना जस्तै लक्षण भएको ‘स्क्रब टाइफस’ देखिन थाल्यो, कसरी बच्ने ?
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको ‘स्क्रब टाइफस’ रोग देखिन थालेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोभिड–१९ का लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो रोग स्क्रब टाइफस देखिन थालेको जनाएका छन्।
उनले उक्त रोगसँग सचेत रहनसमेत अनुरोध गरेका छन्। कोभिड–१९ जस्तै स्क्रब टाइफसमा मानिसलाई उच्च ज्व-रो आउने, आँ–खा रातो हुनु, खो-की, वा-न्ता, पे-ट दु-खा-इ र प-खा-ला सताउनु, सास फेर्न समस्या हुनु धेरै टा-उको दु-ख्नु जो-र्नी र मां-सपे-शी दु-ख्नु, बि-मि-रा देखिनु, टो-केको ठाउँमा कहिलेकाहीँ का-लो दा-गजस्ता लक्षण देखिने गर्दछ।
स्क्रब टाइफस ‘ओ-रिन्सि-या सुसु-गामा-सी’ जीवाणुले सङ्क्रमित एक प्रकारको सानो कि-र्नाको टो-का-इबाट मानिसमा स-र्ने रोग हो। उनका अनुसार स्क्रब टाइफसले म-स्ति-ष्क, क-ले-जो, फोक्सोलगायतमा सङ्क्रमण र कहिलेकाहीँ ब-हुअ-ङ्ग वि-का-र (म-ल्टी अ-र्ग-न डि-ल्फसन)को अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्ने छ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले कोभिड–१९ परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आए पनि स्क्रब टाइफसको परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ। स्क्रब टाइफस रोग मुसाको कानमा वा अन्य जीवजन्तुमा हुने सङ्क्रमित कि-र्नाले मानिसलाई टो-केपछि स-र्ने गर्दछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले समयमा नै रोगको पहिचान गरी औषधि सेवन गरे रो-ग नि-को हुने बताए। मन्त्रालयले समयमा नै उपचार नगरे यसले ग-म्भी-ररुप लिन सक्ने जनाएको छ।
कि-र्नाको टो-का-इबाट ब-च्न खे-त, झा-डी वा वनजङ्गलमा जाँदा लामो बा-हुला भएको कपडा र उपयुक्त जुत्ता लगाउने र शरीरको खुला भागमा की-टना-शक मलमको प्रयोग गर्ने, घर वरिपरिका खेताबारीमा घाँस धेरै बढ्न नदिने र वातावरण सफा राख्ने, मु-सा नि-यन्त्र-णका लागि उपयुक्त किसिमको अन्न भण्डारण गर्नुपर्ने जनाइएको छ।